काठमाडौं असार । देशमा मूल्यवृद्धि अत्याधिक बढिरहेको छ । विगतको तुलनामा कोरोना महामारी पश्चात् र रुस–युक्रेन बीचको युद्धका कारण मूल्यवुद्धिले सीमा नाघेको छ । यसको खास कारण भनेको अन्...
काठमाडौं असार । सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८०को बजेट भाषण वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरे । बजेट प्रति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले केही सकारात्मक देखि नका...
काडमाडौं असार । नेपाल कृषिप्रधान देश भन्दै र पढ्दै आएका छौ । यदि साँच्चै कृषिप्रधान देश हो भने कृषिबाट उल्लेख्य परिवर्तन गर्न किन सकिरहेका छैनौं । यतिमात्र होईन नेपाल कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हु...
आयोजना बन्नेमा आशंका
सरकारले अधिल्लो साता आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तगत ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु.७५ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने जलस्रोत तथा...
दीर्घकालिन समाधानको बाटो
काठमाडौं जेठ । केही महिनादेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यसको मुख्य कारण पछिल्लो समय रुस तथा युक्रेनबीचको युद्ध हो । पन्ध्र–पन्ध्र दिनको अन्तरालमा गरिने मूल...
काठमाडौं १८ जेठ । सरकारले आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अनुमानित आय–व्ययको विवरण बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरे । आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० का ल...
बजेटमा ध्यान !
काठमाडौं जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ को माहोल सकिनै लाग्दा यता संसद्को वर्षे अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि बजेट अधिवेशन मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ । लामो समय देखि प्रमुख प्रतिपक्ष द...
काठमाडौं जेठ । पछिल्लो समय विभिन्न वातावरणीय प्रभावका कारण जलवायुमा असर पर्दै गएको छ। यसरी जलवायु परिवर्तन हुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी पहिरोले नेपालीलाई आक्रान्त बनाउँदै आएको छ । मनसुनजन्य प्रकोपह...
काठमाडौं १४ बैशाख । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्ति पछि २०७४ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन तत्कालीन विशिष्ट परिस्थिति अनुकूल फरक–फरक मितिमा भएको हो । यो पटक भने सरकारले बैशा...
काठमाडौं ७ बैशाख । केही समययता अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आँकडाहरू हामीले अपेक्षा गरेजस्ता छैनन् । यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनमानसमा थुप्रै संशय उत्पन्न गराएको छ । उदाहरणका लागि, बैंकहरू पैसा...
धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी जहाँ १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बन्ने भनेर चर्चा भएको दशकांै बिते । राजनैतिक भुमरीमा परेको सो आयोजना सरकार परिर्वतन भएपिच्छे निर्माण गर्ने क...
सपनाको समृद्धिः विपनामा खोज्ने की ?
राम प्रसाद पौडेल काठमाडौं चैत । मुलुक निर्माणको अभियान चलिरहेको छ । चिया पसल देखि राजनीतिक दलका कार्यक्रम सम्म सुनिने कर्णप्रिय वाक्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सुनिन्छ । यस वाक्यको धरातलमा...
एमसीसीः यथार्थता र उर्लिदो जनमत
काठमाडौ, २६ फागुन । विकासशील देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन्...
विद्युत विकासः मुलुकको समृद्धिको आधार
राम प्रसाद पौडेल काठमाडौ फागुन । नेपालको विद्युतको इतिहास हेर्ने हो भने लामै देखिन्छ । धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, देशको जलस्रोतलाई परिचालन गर्ने नीति धेरै बने, कति नीति दरा...
मुलुकको भविष्यः इतिहासले खोजेको महाअभियान
विकास र समृद्धिको बहस नेपालका लागि नौलो होइन । राणा शासनको अन्त्य पछि नेपालमा विकासको बहस सुरु भएको हो । नेपाल सँगसँगै विकास प्रक्रियाको सुरुवात गरेका चीन, भारत, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूले विश्...